Alphabet announced their plan to discontinue their Internet Balloon project called Loon. ﻿
Alphabet announced their plan to discontinue their Internet Balloon project called Loon.
Alphabet မှ Internet Balloon project တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Loon ကို ရပ်တန့်ရန်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့
Google ရဲ့ ပင်ရင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Alphabet ဟာ Internet လှိုင်းများကိုထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မည့် Balloon project တစ်ခုအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့လေထုပြင်ပအလွှာမှနေ၍ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်များကို ပေးပို့နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာတော့ အဆိုပါ project ကို ပိတ်သိမ်းဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍ ပြောဆိုချက်များအရ ယခင်ကအင်တာနက်ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဖွဲ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသောနိုင်ငံများတွင် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း စမတ်ဖုန်းများရဲ့အကူအညီဖြင့် အင်တာနက်ကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အမြတ်ငွေရရှိဖို့ဟာ ထင်ထားတာထက်ပို၍ ဆုံးရှုံးရနိုင်ခြေများပြားနေတဲ့အတွက် ပိတ်သိမ်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Loom အပါအဝင် ကုမ္ပဏီမှ “အလောင်းအစား” ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဟာ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံခန့်ကို Operate ပြုလုပ်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ သိရှိရပြီး လက်ရှိ Loon တွင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအများစုကို လျော်ကြေးငွေများနဲ့အတူ တာဝန်မှဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပြီး အချို့သောဝန်ထမ်းများကိုတော့ X, Google နဲ့ Alphabet တို့တွင် ပြန်လည်၍ အလုပ် offer များပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။